विचार Archives - Jhapa Today
डा पंकज जलान मांसपेशीको लचिलोपन कम भएर शरीर राम्रोसँग नचल्ने स्थितिलाई पार्किन्सन्स भनिन्छ। सामान्यतया बुढेसकालमा लाग्ने यो रोग विशेषगरी ६०–६५ वर्षको उमेरमा हुने गर्छ। ३ सय वर्ष पहिला डा.पार्किन्सन्सले यो रोग व्याख्या गरेका थिए। विश्वमा […]
बिर्तामोड, चैत २० । समाजसेवासँगै व्यापारमा उदाउँदै गरेका युवा हुन् माधवकुमार झा । २२ वर्षकै उमेरमा उनी राजनीतिमा पनि सक्रिय छन् । बिर्तामोडका युवामाझ लोकप्रिय उनी साथीभाइको साह्रोगाह्रोमा तुरुन्त पुगिहाल्छन् । किशोर अवस्थामा प्रवेश गरेपछि, […]
महेन्द्रकुमार गिरी संविधानले नै सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बाका रूपमा स्वीकार गरेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा पनि सहकारी क्षेत्रले प्राथमिकता पाउनुपर्छ भनेर हामीले लबिङ गर्दै आइरहेका थियौँ । नेपालमा बैंकको पहुँचमा पुग्न […]
-पुष्पा थपलिया बालबालिकाहरुले अब प्रविधिका माध्यमबाट पढ्न सुरु गरेका छन्। कोरोनाकाल अगाडि ‘अनलाइन कक्षा’बारे हाम्रा बालबालिकाले सुनेकासम्म पनि थिएनन्। तर, अहिले त्यसमै अभ्यस्त भइसकेका छन्। उनीहरुका लागि मोबाइल, ल्यापटपजस्ता छुट्टै उपकरण चाहिने भएको छ। हामीले […]
आरबी बुढाथोकी नेपालमा दिनानुदिन कोरोना संक्रमितको संख्या थपिँदै छ। संक्रमित बढ्दै जाँदा अस्पतालमा बेड र आइसियु अभाव भएपछि अधिकांश सर्वसाधारण आफ्नै घरलाई आइसोलेसन बनाएर बसेका छन्। अपत्यारिलो रुपमा ह्वात्तै कोरोनाका बिरामी बढ्न थालेपछि के खाने […]
डा सुमनप्रसाद अधिकारी हाम्रो समाजमा मानसिक रोग र यसको उपचारबारे धेरै भ्रमहरू छन्। वैज्ञानिक आधार नभएकाले यस्तो रोगनै हुन्न भन्ने जमात पनि ठुलै छ। तर सिग्मंड फ्रेडको सिद्धान्तसँगै मनको अस्तित्वलाई विज्ञानले स्वीकारेको धेरै भयो। यसैमा […]
कल्पना गरौं, आजदेखि विश्वभरका महिलाहरुको महिनावारी बन्द भयो, र अब कहिल्यै कुनै पनि महिलाको महिनावारी हुँदैन । अबको केही दशकपछिको अवस्था के होला ? पक्कै, मानिस जन्मिने प्रक्रिया नै बन्द हुनेछ । केही दशकपछि मानव […]
-सुरेश भट्टराई एउटा डरलाग्दो हल्लाले विश्वमा थप आतंक सिर्जना गरिरहेकाे छ। त्याे हाे- बुधबार (अप्रिल २९) १९९८ ओआर-२ नामक क्षुद्रग्रह पृथ्वीको नजिकै आउँदै छ! यसबारे वास्तविक तथ्य सम्बन्धित संघ/सस्थाले जानकारी गराइरहेका भए पनि त्रसित बनाउने प्रकृतिका […]
३१ डिसेम्बर, २०१९ — समय दिउँसो १ः३८ बजे। एक चिनियाँ वेबसाइटमा खबर आयो– औद्योगिक नगर वुहानको मासु बजार वरिपरिका क्षेत्रमा एउटा नौलो रोग फेला पर्यो। सामान्य रुघाखोकीबाट सुरू भएर निमोनियाको लक्षण देखाउने त्यो रोग अहिलेसम्म […]
के कोरोना भाइरस (कोभिड १९) जैविक हतियार हो ?
झापा, चैत १५ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको छ । छ लाखभन्दा बढी संक्रमण र करिब २८ हजारजनाको मृत्युसँगै कोभिड १९ ले यो शताब्दीकै सबभन्दा ठुलो महामारीको रूप लिइसकेको […]